Gaashaandhigga oo xaqiijiyay dilka hogaamiyihii Alshabaab Axmed Godane – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
5th September 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com-Wasiirka gaashaandhigga dowlada Federalka Soomaaliya Maxamed Sh. Xasan Xaamud oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday meel u dhexeysa Baraawe iyo Sablaale ayaa ku tilmaamay weerarkaasii in uu guul ku dhamaaday uuna ka mid ahaa hogaamiyihii ururka Alshabaab Axmed Godane dadkii ku dhintey weerarkaas.
“Ururka Alshabaab waa urur argagaxiso oo caalami ah dowladana waxa ay ka codsatay in laga caawiyo sidii loola dagaalami lahaa ururkaas oo dunida oo dhan halis ku ah.” Ayuu u sheegay wasiirka gaashaandhigga VOA laanteeda Afka Soomaaliga.
Wasiirka gaashaandhiga dowlada Federalka Soomaaliya Maxamed Sh,Xasan Xaamud oo ka hadlayay howlgalka la magac baxay Badweynta Hindiya in ay sii wadi doonaan illaa iyo inta ururka Alshabaab guud ahaan dalka Soomaaliya loogaga saarayo.
Ururka Alshabaab ayaan weli ka hadlin wararka sheegaya in la dilay hogaamiyahoodii Axmed Godane. Hase ahaatee ururka Alshabaab ayaa isaga baxay deegaano badan oo ay hore gacanta ugu hayeen.